पिउनदेखि मन्त्रीसम्म लाई ﻿घुसको नि दर रेट ! – www.agnijwala.com
पिउनदेखि मन्त्रीसम्म लाई ﻿घुसको नि दर रेट !
बैशाख भन्सारमा वस्तुका आधारमा भन्सार मूल्य तय गर्न दररेट बनेको हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ बजेटमा आउने यो सामान्य विषय हो । मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सारमा भने गाडी पास गराएबापत तिर्नुपर्ने घुसको समेत दररेट कायम छ । त्यो कुनै भित्तामा त टाँसिएको छैन । तर कर्मचारी र एजेन्टलाई कण्ठै छ ।
भैरहवा भन्सार नजिकै सानो गल्लीभित्र रहेको भन्सार एजेन्टको अड्डामा पुग्दा घुसको दररेट फेला पर्‍यो । ती एजेन्टका अनुसार प्रत्येक गाडी पास हुंदा औसतमा १५ सय कर्मचारीको हातमा राखिदिनुपर्छ । भैरहवा भन्सारबाट दैनिक करिब साढे पाँच सय मालवाहक गाडी मुलुकमा भित्रिन्छन् । यो दररेटले भैरहवा भन्सारमा दैनिक सवा आठ लाखको घुस कारोबार हुन्छ । वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी । यो कारोबारमा भन्सार छल्ने चलखेलका ठूला योजना र यात्रु कक्षको कारोबार जोडिँदैन । कसले बुझ्छ त यति धेरै घुस रु ती एजेन्टले निर्धक्क भने– ‘पिउनदेखि मन्त्रीसम्म ।’
सीमादेखि भैरहवा बजारसम्म आउन निःशुल्क रूपमा सुविधापत्र उपलब्ध गराइन्छ । तर त्यसमा पनि कर्मचारीले असुली गर्छन् । भारतीय कार लिएर भैरहवा बजारसम्म जान भारतबाट आएका एक जना पर्यटकलाई दलालले सुविधापत्र बनाइदिन्छु भन्दै ल्याएका रहेछन् । ५० भारु लिएर ती दलालले सुविधापत्र बनाए । २० भारु कर्मचारीलाई दिए र ३० भारु आफूले राखे । अन्नपूर्णकर्मीले निःशुल्क उपलब्ध हुने सुविधापत्रमा किन रकम लिएको भन्ने प्रश्नमा ती दलाल ९सोमनाथ तिवारी० ले सुविधापत्र लिँदा पैसा बुझाउनैपर्ने भएकाले रकम लिएको बताए । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ